မယားကြီး နဲ့ မယားငယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မယားကြီး နဲ့ မယားငယ်
မယားကြီး နဲ့ မယားငယ်
Posted by johnnydeer on Oct 25, 2013 in Short Story | 19 comments
ကျွန်တော် ရန်ကုန်က ပြန်လာတော့ ကားက Auto ကော Manual ကော တွဲလျှက်ပါတဲ့ ကားမောင်းပြန်လာတာဆိုတော့… Autoမောင်းလိုက်… ဆီကုန်တယ်ထင်ပြီး… Manual ပြန်ပြောင်းမောင်းလိုက် ဂီယာချိန်းလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုတ်ပြီး တော်တော်ဗျာများခဲ့တာပါကလား…ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းနဲ့ ရှုတ်ရှက်ခတ်နေခဲ့ပြီး တခါတလေ ကိုယ်ဘာနဲ့ မောင်းလို့ မောင်းနေမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး…
အရင်တုန်းကတော့ဗျာ… Manual ပဲ ရှိတဲ့ခေတ်ကိုး…အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ကားမောင်းရတာ အလုပ်တော်တော် ရှုပ်တယ်…ကလပ်နင်း…ဂီယာထိုး… ကလပ်ပြန်လွှတ်…လီဗာနင်း… နည်းနည်းလေးသွား…အရှိန်လေး နည်းနည်းမြန်လာရင်…ဒီအတိုင်းပြန်လုပ်… လက်နှစ်ဖက် ခြေနှစ်ဖက်…မျက်စိ…နား…တစ်ခုမှ မအားရပါဘူး… ကားမောင်းသင်ပေးရရင်လဲ ဒီကလပ် အလွှတ် လီဗာ အနင်း Balance မကိုက်တာနဲ့ ဆောင့်ထွက်သွားရတာနဲ့ စက်ထိုးရပ်သွားရတာနဲ့ တကယ့် အစုံမှ အစုံပါပဲ…တတ်အောင် တော်တော်သင်ပေးရတယ်…ပျမ်းမျှခြင်းဆို တစ်ယောက် တစ်ယောက် တစ်ပတ် ဆယ်ရက်လောက်တောင် သင်ပေးရမယ် ထင်တယ်…
အခု Auto တွေ ထွက်လာတော့ အရင်က ရှုတ်ခဲ့သမျှ တော်တော် ရှင်းသွားတယ်…စက်လေးနှိုး ဂီယာတံက ဘုသီးလေး နှိပ်ပြီး D မှာထား…လီဗာနင်း မောင်းပေရော့…ဘယ်ကွေ့ချင်ရင် လက်ကိုင် ဘယ်ဘက်လှည့်…ညာကွေ့ ချင်ရင် ညာလှည့် လို့ လောက်ပဲ သင်ပေးလိုက်ယုံပဲ…အရင်တစ်ပတ် ဆယ်ရက်တောင် မတတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေတောင် နှစ်ရက်လောက်ဆို တတ်ရော…ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ဘယ်ဘက်လက်ဆို အားလွန်းလို့တောင် ခက်နေသေး… Manual တုန်းကလို မီးပွိုင့်တွေမှာ စက်ထိုးရပ်သွားတာတွေ…ကုန်းတက်ကြီး ယာဉ်ကြောပိတ်နေလို့ ကလပ်ကြီးနဲ့ လီဗာကြီးတွဲနင်းထားရတာတွေ တော်တော် သက်သာသွားတယ်…
Manual က အလုပ်ရှုတ်တယ်…ဒါပေမယ့် ဆီစား သက်သာတယ်…ဘယ်နေရာ ဘာဂီယာ ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ချရတယ်…ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ကို ပိုတိုးတက်စေတယ်…
Auto ကျတော့ လူသက်သာတယ်…ဆီပိုစားတယ်…အလိုက်ကန်းဆိုး မသိဘူး…သူ့အတွက် ပိုကြည့်တယ်…4 နဲ့ ခိုးမောင်းလို့ ရမယ့်နေရာ3နဲ့ပဲ သွားတယ်…2 နဲ့ သွားလို့ရတာကို 1 နဲ့ သွားတယ်…အရာရာ သူ့ သဘောချည်းပဲ…ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ တောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး…ပိုင်ရှင်ခမျာမှာလဲ ဆီဖိုးနဲ့တောင်မသက်သာရှာပါဘူး…
Manual မောင်းရတာက ဘာနဲ့တူလဲ ဆိုတော့ မယားကြီးနဲ့ ပေါင်းရသလိုပဲ….သားရေး သမီးရေး ဆွေရေး မျိုးရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ပွဲလမ်းသဘင် တကယ့် အစုံမှ အစုံပဲ…ဗဟီရတွေ များလိုက်တာ….ဒါပေမယ့် မယားကြီးကျတော့ ငယ်ပေါင်းဆိုတော့ ကိုယ့်ကို နားလည်တယ်…စီးပွားရေး မကောင်းရင်လဲ သူ့ဘာသာ သူ အဆင်ပြေအောင် နေတတ်တယ်…နားပူနားဆာ မလုပ်ဘူး…ထိုက်သင့်သလောက်ပေးရင် ဖြစ်ပြီ…
Auto မောင်းရတာကျ မယားငယ်နဲ့ ပေါင်းရသလိုပဲ…ဇိမ်ပဲ… လူသက်သာလိုက်တာ…ဘာမှကို လုပ်စရာမလိုဘူး…ဒါပေမယ့် သူက အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိဘူး…လိုတာထက်ပိုလိုချင်တယ်…3 နေရာ2နဲ့ သွားချင်တယ်…2 နေရာကို 1 နဲ့ ဒိုးဖို့ ကြံတယ်…ကုန်လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံပေါ့နော်…ရှိမှန်းမသိ…မရှိမှန်းမသိ…နားပူနားဆာလုပ်ပြီး လိုတာထက် ပိုတောင်းတယ်…
အဲ့ဒီတော့ဗျာ…မိတ်ဆွေတို့ကော…ရှေးရိုးစွဲ ငွေသက်သက်သာသာ Manual လေးပဲမောင်းချင်သလား.. .ခေတ်မှီမှီ လူသက်သက်သာသာ ငွေပိုအကုန်ခံပြီး Auto လေးနဲ့ နှစ်ပါးသွားမလား…ပြောပြကြပါဦး…သဘောထားလေးကို…
(ကျွန်တော့်ကိုကော ဘာကြိုက်သလဲ ပြန်မေးချင်သေးသလား…)
Manual လေးလဲ မစွန့် နိုင်…Auto လေးလဲ မောင်းချင်…နဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ဗျာများပါစေ…Manual Auto တွဲပါတာလေးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…ဟီး…ဟီး…
ကျနော်ကတော့ အကြီးလည်းမရှိ အငယ်လည်းမသိ
မီးပွိုင့်မိမှာလည်းမပူရသော ၉၆၉၃ ကို ပိုကြိုက်ပါ၏ ၊
( ၉၆၉၃ = ကိုယ့်ခြေထောက် ကိုယ်သုံး )
စ တာပါဗျာ ၊ အော်တိုက ကောင်းတာမှန်ပေမယ့်
ပါကင်ဂီယာက တစ်မျိုး ဆီအုပ်တာက တစ်မျိုး ရှုပ်ပါ့ ၊
မန်နူရယ်က တွန်းနိူးလို့ရသေးတယ် ၊
အဘတို့က ခပ်ရိုးရိုးပဲ ကြိုက်ပါတယ်ကွယ် ၊
Manual ဆိုရင်တော့ အနီးအနားအကူအညီတောင်းပြီးတွန်းနှိုးလိုက်လို့ရတယ်..
ပြောရရင်တော့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တော့ရှိတာပါပဲ..
ဒါပေမဲ့ အော်တို က ပိုဆေ့ဖ် ဖြစ်ပါတယ်
ကျော့်တို့ကတော့ လူပျိုဂျီးတွေ ဆိုတော့.. အော်တိုဂိုပဲ… ပုံစံမျိုးစုံပြောင်းပီး
ကားများများစီးရတာပေါ့ဗျာ.. ဆီများများ ထည့်နိုင်အောင်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့..
မယားငယ်ရော ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်တာလည်း အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပါ့။
မယားကြီးလည်းမရှိဘူး… မယားငယ်လည်း မသိဘူး…
ပြိုင်မောင်းရမယ်ဆို Manual Gear ကြိုက်တယ်…
အေးရာအေးကြောင်းဆိုရင်တော့ Auto Gear ပေါ့…
ဟီ ဟိ အဲဒါဆို… မယားကြီး/ငယ်တွေ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ထွက်မယ်မသိ…
မယားကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မယားငယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့လှော် ဒီကွေ့ ဒီတက်နဲ့ လှော်ပေါ့ဗျာ….
ကားဆိုသီမှာ အင်ဂျင် ကောင်းပြီး မော်ဒယ်မြင့်ဖို့ အဓိက ပါဗျာ
အင်ဂျင်ကောင်းမှ စီးလို့ကောင်းမှာ ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် မြင့်မှ လူဂျားထဲ မောင်းလို့ တင့်တယ်ပေမပေါ့
တမီးက တော့လေ ကစ်စတက်နဲ့ ဂီယာထိုး လီဗာတင်ပြီး မောင်းရတဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးကိုတောင် အင်ဂျင်ဝိုင် နပ်မှန်အောင် မနည်းတိုက်နေရသေးတဲ့ဘွဆိုတော့ လေ …. အင်း …ကားစီးဖို့တော့ နည်းနည်းဝေးပါသေးတယ် :'( :'(
ကျွန်မကတော့ Auto ပဲကြိုက်တယ်။ Manual ကျတော့ ကုန်းတက်မှာ သူများကားခဏခဏစောင့် လို့ နောက်ချည်းပြန်လိမ့်ဒါ။ ဟီဟိ
အော်တို မောင်းရင် အိပ်ငိုက်လို့ 
auto gear နဲ့ manual gear ကို မယားကြီး မယားငယ်နဲ့ ဥပမာ ပေးလိုက်တာ ရှင်းကနဲ လင်းကနဲပဲ။
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စတိုးဖို့ထက် ကိုယ်သက်သာဖို့ကို ပိုအလေးထားလို့ auto gear ပဲ ကြိုက်တယ်။
အော်တိုဂီယာကို ဆန်ဖရန်လိုတောင်ကုန်းပေါတဲ့မြို့ကလူတွေက မောင်းရသက်သာအောင်ထီထွင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့…ဆိုကြတယ်..
ကုန်းပေါရင်.. မန်င်ညူရယ်က.. ကလပ်ခ်ျပလိပ်စားတာနဲ့တင်… အလုပ်မဖြစ်ပါကြောင်းရယ်ပါနော..
ယောက်ျားတွေ ဘာလို့မယားကို..” ကြီး”အဖြစ်ရာထူးတင်ပေးတတ်ကြသလည်း..?
ဥပဒေကြောင်းအရ.. တရားဝင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ.. ပုရိသအပေါင်းကြိုးစားကြစေလို..
ကျုပ်​က​တော့ သစ်​လုံးတင်​ကားသမားဆို​တော့ ….
ဖရိန်​​ကောင်းဖို့ အဓိက… ဗျ ..
တုန်တုန်ချိချိအဖွားကြီးကတော့ အော်တိုကိုတောင် ရှေ့သို့စနစ်နဲ့ မနည်းမောင်းနေရတာ။
manual နဲ့သင်လာတာ အနှစ်အစိတ်ကို မမောင်းရဲခဲ့ဘူး။
ခုတော့ Manual မောင်းပါတယ်..
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး မောင်းရတာဆိုတော့ အလုပ်တော့ များတယ်.. နောက် ကျွ်မးကျင်သွားရင်တော့
Auto ဘဲ မောင်းချင်တယ်.. ခေါင်းမစားဘူး. ခြေထောက်အလုပ်မရှုပ်ဘူးလေ..။
ဒီက လူငယ်တွေကျတော့ ဂီယာချိန်းပြီးမောင်းရတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်..။ စတန့် လုပ်ချင်တာလေ..။
ဒီမှာ ယဉ်တိုက်မှုတွေ အက်ဆီးဒင့်န်တွေဖြစ်ရင် လူငယ်တွေများတယ်..။
ဒီမှာ တစ်ယောက်ထဲတောင် ချာချာလည်…
ရောက်ချင်တဲ့ အချိန်မှ ရောက်တော့ကွယ်…
အော်တိုဂီယာလေးနဲ့ နောက်မီးလေး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး မှတ်မှတ်ယယ မယားငယ်ဒွတ်ခပေးလို့ လည်သွားတယ်.. :mgreenn:
ဟဲ့နွားဆိုပြီးအော်လို့ ရုန်းရင်ရုန်း မရုန်းလို့ကတော့